Wabiga Shabelle oo buux dhaafiyey gobalka shabeelada dhaxe (daawo sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wabiga Shabelle ayaa qarka u saaran inuu ku fataho deegaano horleh oo ka mid ah gobolka Sh/dhexe, kadib markii roobab xoog leh ay ka da’een gobolka.
Dadka ku nool hareeraha wabiga Shabelle ayaa habeen iyo maalin waxa ay ilaalo ka yihiin wabiga si uusan u fatahin inkastoo deegaanada qaarkeed uu wabigu ka fatahay.
Wabiga Shabelle ayaa ka fatahay deegaanada Xawaadley oo ka tirsan degmada Balcad,deegaanka Maagaay oo ka tirsan degmada Jowhar iyo deegaanka Huriwaa oo hoostaga degmada Mahaday.
Fatahaadan ayaa waxyeelo badan gaarsiisay dhul beereed ay ku abuurnaayeen dalagyo kala gedisan sida sisinta,galley,khudaar iyo Bariis.
Sidoo kale wabiga ayaa marka aad si hoose u fiiriso waxaad ku arkeysaa meelo badan oo la saaray jawaano ay ciid ka buuxdo si uusan u soo fatahin. Waxaa laga mamnuucay wabiga in doon lagu dhex maro waayo waxaa halis uu u yahay wabiga in uu fataho.
Dadaalo xoog leh ayaa ka socda gobolka Sh/dhexe oo lagu doonayo in loogaga hortago fatahaada wabiga hase yeeshee tuulooyinka ku yaal hareeraha wabiga ayaa ka cabanaya inaysan haysan jawaano ay biyaha isaga celiyaan.
Wasaarada amniga ayaa ku macnaysay diidmada mootooyinka bajaajka mid laxiriirta amniga